Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Ny mpanjakavavy Elizabeth II dia nandà ny loka Oldie of the Year
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Entertainment • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Ny mpanjakavavy Elizabeth II dia nandà ny loka Oldie of the Year.
Nanantitrantitra ny mpanjakavavy Elizabeth II fa “tsy mahafeno ny mason-tsivana mifandraika amin'izany” izy, satria “antitra araka ny tsapanao ianao.”
Ny magazine 'The Oldie' dia naka ny Mpanjakavavy Elizabeth II tamin'ny lokan'ny Oldie of the Year tamin'ny 2021.
Ny mpanjaka anglisy anglisy lava indrindra dia nanolo-kevitra ny magazine 'The Oldie' tokony hijery any an-toeran-kafa.
Ny nomerao voalohany amin'ny gazety dia navoaka tamin'ny taona 1992, ary io famoahana io dia nanohana ny fomban-drazana, mankalaza ny fahanterana amin'ny kolontsain'ny tanora indrindra.
Ny Oldie, magazay isam-bolana anglisy nosoratana ho an'ny olon-dehibe “ho safidy maivana ho an'ny mpanao gazety variana amin'ny tanora sy ny olo-malaza”, ny tantaran'ny Mpanjakavavy Elizabeth II taorian'ny nampandrenesany azy fa voafidy handray ny loka Oldie of the Year 2021 an'ny magazine izy. .
Ilay fiandrianany Queen Elizabeth II dia nandà ny anaram-boninahitra natokana ho an'ny zokiolona noho ny zava-bitany, nanitrikitrika fa "tsy mahafeno ny masonkarena mifandraika amin'izany izy" satria "antitra araka ny tsapanao ianao."
Ny gazety dia namoaka ny valintenin'ny mpanjaka tamin'ny fanontana novambra, na dia ny 21 Aogositra aza ny hafatra.
Tamin'ny taratasy fohy misy andalana telo, ny mpanjaka anglisy anglisy lava indrindra dia nanoro hevitra fa tokony hitady any an-toeran-kafa ilay magazay mba hahazoana "olona mendrika kokoa."
Gylo Brandreth, seza, mpanoratra ary fampielezam-peo an'ny Oldie loka, dia namaritra ny taratasin'ny mpanjakavavy ho “mahafinaritra”, ary nanampy izany, fa “angamba amin'ny ho avy dia hanakoako indray ny Majesty.”
Ny olana voalohany The Oldie Ny gazety dia navoaka tamin'ny 1992, ary ny famoahana dia nanohana ny endriny tsy misy dikany, mankalaza ny fahanterana amin'ny kolontsain'ny tanora indrindra. Nandritra ny taona maro dia nanolotra ny loka Oldie of the Year ho an'ny olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra izay nanao fanomezana manokana ho an'ny fiainam-bahoaka - nanomboka tamin'ny mpandresy Oscar ka hatramin'ny nahazo loka Nobel, avy amin'ny mpitsabo mpanampy amin'ny fiaraha-monina ka hatramin'ny atleta taloha.
Notontosaina tamin'ny 2019 Oktobra tao amin'ny Hotely Savoy ny lanonana mari-pankasitrahana tamin'ity taona ity - ny voalohany notontosaina manokana nanomboka tamin'ny taona 19 noho ny areti-mifindra. Anisan'ireo nahazo ny anaram-boninahitra Oldie of the Year 2021 dia i Delia Smith, Bob Harris, Barry Humphries, Margaret Seaman, Roger McGough, Dr Saroj Datta, Dr Mridul Kumar Datta ary Sir Geoff Hurst.
Queen Elizabeth IINy vadin'i Prince Philip, vadin'ny maty, dia nantsoina hoe Oldie of the Year tamin'ny taona 2011. Tao amin'ny taratasim-pankasitrahana nataony dia nananihany izy hoe: manomboka miala amin'ny endriny taloha. ”
Ilay mpanjakavavy manjaka, izay efa nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana anglisy nandritra ny fitopolo taona tamin'ny 2022, dia mbola manana fandaharam-potoana be atao. Ny talata lasa teo dia nanao mpijery roa tamin'ny alàlan'ny rohy video izy, niarahaba ny ambasadaoro japoney sy ny EU, talohan'ny fampiantranoana hetsika ho an'ny Global Investment Summit ao amin'ny Windsor Castle.
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 45